सरकारसँग ७ लाख बेरोजगारले मागे रोजगारी - Kohalpur Trends
सरकारसँग ७ लाख बेरोजगारले मागे रोजगारी
७ मंसिर, काठमाडौं । कोरोना महामारी सुरु भएपछि देशमा रोजगारीको चरम संकट आएको सरकारी तथ्यांकहरुबाटै स्पष्ट हुन्छ । अहिले नै करिव ७ लाखले सरकारसँग रोजगारी मागेको पाइएको छ ।
साना विकास निर्माण आयोजनामा १०० दिनसम्म रोजगारी दिने गरी ल्याएको हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन देशभरबाट ४ लाख ५७ जना स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका थिए ।
चालु आवमा बेरोजगार सूचीकरण सकिएको छैन । धेरै बेरोजगार छुटेकाले सूचीकरणको म्याद थप गर्ने तयारी हुँदैछ । तर अहिलेसम्म सूचीकृत बेरोजगारको संख्या भने ६ लाख ८७ हजार ६४७ जना पुगिसकेको छ ।
सूचीकरण सकिँदासम्म गत वर्षकोभन्दा झण्डै दोब्बर हुने अनुमान श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको छ ।
जबकी स्वेच्छिक दर्ता भएकाले यसमा बेरोजगारको ठूलो पंक्ति समेटिन नसकेको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । निर्माण क्षेत्रमा केही हप्ता काम पाइने भएकाले धेरैजसो शैक्षिक बेरोजगार युवाले यो सूचीमा नाम दर्ता गराउन चासो दिएका छैनन् । स्थानीय तहहरुले रोजगार कार्यक्रमको प्रणालीमा दर्ता हुन चाहेकाहरुलाई मात्र दर्ता गराउने गरेका छन् ।
अब सरकारले बाचाअनुसार काम हुने हो भने ६ लाख ८६ हजार ७८५ जनालाई कम्तिमा सय दिनको रोजगारी दिनुपर्छ ।
कार्यक्रमको बजेटले यतिको संख्यामा रोजगरी सिर्जना गर्न सक्दैन । यो वर्ष कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । बजेट र बेरोजगार संख्या तुलना गर्दा सरकारको लक्ष्यअनुसार करिब ४ लाख सूचीकृत बेरोजगारले कार्यक्रमबाट लाभ पाउनै सक्दैनन् ।
राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण २०१८ का अनुसार बेरोजगारको हिस्सा कुल श्रम शक्तिको ११ प्रतिशत एवम् अर्धबेरोजगारको हिस्सा ३९ प्रतिशत थियो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको अंश करिब ४१ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देखाएको थियो । कृषिले करिब ६० प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रले करिब १४ प्रतिशत र उद्योगले करिब ८.१ प्रतिशत रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराएको देखाएका थियो ।
महामारीपछि निर्माण, पर्यटन, उद्योग लगायतका क्षेत्रका धेरै मजदुर बेरोजगार बनेका छन् । १०–१० लाख मजदुर कार्यरत पर्यटन र निर्माण क्षेत्र अझै पुनस्र्थापित हुन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्र केही सल्बलाएपनि घुमफिरमा जोखिम कायमै भएकाले विदेशी पर्यटकको आगमन न्युन छ ।
यही समयमा विदेशबाट झण्डै १ लाख ५१ हजार युवा काम गुमाएर फर्किएका छन् । उनीहरुमध्ये केही श्रम स्वीकृतिको नवीकरण गरेर फर्किएपनि अधिकांश युवा म्यानपावर कम्पनीतिर धाउन थालिसकेका छन् ।
यो बेला देशका विभिन्न क्षेत्रमा परेको महामारीको असरले आर्थिक गतिविधि मन्द छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र हैन, औपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका कामदार पनि फुर्सदिला छन् । महामारीका बेला रातारात भारतबाट आएका कामदार अहिले उतै फर्किदै छन् । मौसमी रुपमा पाइने काम पनि महामारीले खोसेपछि देशभित्र बेरोजगार रहेकाहरु रनभुल्ल छन् ।
७ अर्ब थन्कियो
सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिनकै लागि भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको थियो । यस अन्तरगत खर्च गर्न करिब ७ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान स्थानीय तहमा पुगिसकेको बताउँछन्, कार्यक्रमका संयोजक केशव सुवेदी । उनकाअनुसार स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना निर्माण तथा मर्मत कार्यमा संलग्न गराउने योजना अनुरुप रकम पठाइएको हो ।
यो वर्ष स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक निर्माण कार्यमा श्रममूलक विधिबाट आयोजना कार्यान्वयन गराई २ लाख जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराउने योजना श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको छ ।
यो वर्ष अहिलेसम्म स्थानीय तहमा ६ अर्ब ८९ करोड उपलव्ध गराईसकिएको र यसबाट १ लाख ३३ हजार ३२७ जनालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलव्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आवको लागि थप ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख अनुदान रकम निकट भविष्यमा पुनः बाँडफाँट गरी पठाइने जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका सहसचिव भरतमणि पाण्डले दिए ।
सरकारले ४ महिनाअघि नै ४ अर्ब ७५ करोड यही कार्यक्रमको लागि स्थानीय तहहरुमा पठाएको थियो । रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारको समस्या सम्बोधनमा त्यो रकम उपयोग गर्न ढिलाइ भइरहँदा संघीय सरकारले पनि चासो दिएको छैन ।
सरकारले विगतकै जस्तो साना निर्माण आयोजनाहरुमा काम दिने गरी यस्तो रकम स्थानीय तहमा पठाएको हो । तर, वर्षायाममा विकास निर्माणको काम गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय तह हात बाँधेर बसे । रोजगारीका लागि गएको रकम स्थानीय तहका खातामा थुप्रिएपनि बेरोजगारीका कारण भोकमरीको शिकार हुने अवस्था आएपछि श्रमिकहरु भारततिर भासिनु परिरहेको छ ।
पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस्तै बेला स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रममार्फत भारतमा जाने अर्धदक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा श्रममा आधारित रोजगारी दिन सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि त्यही हो । सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएर बाध्य भएर भारततिर लागिरहेका अदक्ष कामदारलाई रोकौं ।’
सरकारले सबै बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन । ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले विपन्न अवस्थाका दैनिक हातमुख जोड्नै मुस्किल पर्ने परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने भन्दै तीन वर्षअघि यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । स्वरोजगार कार्यक्रमको माग धेरै भए पनि सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने श्रमिकलाई सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने बताउँदै कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
अहिले त्यस्तै रोजगारी गर्ने वर्गका श्रमिक गाउँघरमा टिक्न सकिरहेका छैनन् । महामारीका बेलामा परिवारको जीविकोपार्जनका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका श्रमिकलाई सरकारले यसै कार्यक्रममार्फत तत्काल सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्ने पूर्वअर्थसचिव सुवेदीको भनाइ छ ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ स्थानीय तहहरुमा गएको बजेट थोरै हुने र बेरोजगार धेरै हुने भएको लक्ष्य अनुसार रोजगारी दिन असम्भव रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट पाए पनि अधिकांश स्थानीय तहरुले कार्यक्रम लागू गर्न तयारी गरेका छैनन् ।
यस्तो रकम कहाँ उपयोग गर्ने भनेर तय गरिए पनि उनीहरु आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्रै खर्च गर्ने योजनामा छन् । श्रममा आाधारित सानो परियोजना सञ्चालन हुने भएकाले आत्तिन नपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
गत वर्ष सरकारले ६० हजार जनालाई सय दिन रोजगारी दिएको दाबी गरेको थियो । साना पूर्वाधार परियोजनामा खर्च हुने भनिए पनि कार्यक्रमको अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहले कार्यक्रम सम्पन्न भएको रिपोर्ट पठाएका थिए । तर कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुमगन नै नगरी सरकारले एकैपटक ६० हजारले रोजगारी पाएको तथ्यांक बाहिर ल्याएको थियो ।
लकडाउनका बेला रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम चलाइएकोमा श्रम मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको आशंका छ ।
सरकारले गत जेठमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमलाई विदेशबाट फर्किएका र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेर अहिले कामविहीन भएकालाई कामका आधारमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । गत वर्ष स्थानीय तहहरुमा ४ अर्बभन्दा बढी रकम गएको थियो । तर अन्तिममा बजेट दुरुपयोग भएको स्थानीय तहकै अधिकारीहरु स्वीकार्छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका पुराना कामलाई रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत भएको भन्दै बजेट मिलान गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम सडकको नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने लगायतका काममा खर्च हुने गरेको भन्दै सुरुबाटै विरोध हुँदै आएको छ । जन श्रमदानबाट गर्न सकिने काममा ज्यालका नाममा रकम खर्चिएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले यो वर्ष कार्यविधि सच्याउने भनेको थियो । तर, यसको कार्यविधि अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने विपिन्न परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्ने गरी मौसमी रोजगारी दिन कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताउँछन् । योसँगै युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने स्वरोजगार कार्यक्रम आवश्यक रहेको भन्दै उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमले मात्रै बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन ।’
रोजगारी घोषणामा मात्रै
चालू आर्थिक वर्षमा ८ लाख जनाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा बजेटबाट गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाखसहित गरिबी निवारण कोषको रु.१९ अर्ब परिचालन गरेर डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो ।
संघीय सरकारले दिने सीपमूलक तालिममार्फत ७५ हजार र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने लामा, छोटो अवधिका तालिमबाट ५० हजारका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा थियो । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार जनालाई रोजगरीमा आवद्ध गर्ने, हरेक बैंक शाखाबाट तोकिएको संख्यामा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नेसहित वन, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रबाट पनि थप रोजगारी सिर्जना गरेर ८ लाखलाई रोजगार बनाउने भनिएको थियो ।
करिब आधा आर्थिक वर्ष बित्दा घोषणा अनुरुपको काम भने हुन सकेको छैन ।
Previous Previous post: ॐ लेखि सेयर गरौं!!! सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ…!!!
Next Next post: बलात्कारमा सजाय बढ्यो, मिलापत्र गराउनेलाई ३ वर्ष जेल
प्रहरी घेरामा बनिया गाउँ, १५ पक्राउ, यस्तो थियो बनिया घटना
trendsminad December 2, 2020	No Comments
बाँकेको जानकी गाउँपालिकाको बनियाँ गाउँमा सोमबार स्थानीय दुई समूहबीच झडप हुँदा एक जनाको ज्यान गयो । गुरुवा गाउँमा भएको मेलामा सुरु भएको विवाद घरसम्म पुग्यो…
कर्टिस जोन्सको गोलले लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा
१७ मंसिर, काठमाडौं । युवा खेलाडी कर्टिस जोन्सले गरेको एकमात्र गोलको मदतमा अयाक्सलाई पराजित गर्दै इंग्लिस क्लब लिभरपुल युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा प्रवेश…
अर्घाखाँचीमा घरमा एक्लै बस्दै आएकी वृद्धा मृत भेटिइन्
१७ मंसिर, काठमाडौं । अर्घाखाँचीमा एकजना वृद्धा मृत फेला परेकी छन् । घरमा एक्लै बसेकी महिला चुल्हो नजिकै शरीको केही ठाउँमा आगोले पोलिएको अवस्थामा मृत…
आज ५० अर्ब तरलता उठाउँदै राष्ट्र बैंक
१७ मंसिर, काठमाडौं । बजारमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार ५० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाउने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था यतिबेला…
trendsminad December 2, 2020 No Comments